Nambaran’Atoa Ramahandrimanana Solofoniaina Daniel, mpiasa birao fa mila, ampiharina ny lalàna efa misy. Tsy baiboly akory io ka ovaina amin’izay ilana azy, hoy izy. Tsy ampiasaina akory ve ny lalàna dia ovaina sahady. Midika izany, fa tahotra no tsy hamoahan’ny fitondrana ny didim-panjakana hampiharana io lalàna mifehy ny fanoherana io, hoy ny nambarany. Ny antoko Tim no manana ny maro an’isa amin’ny fanoherana eny amin’ny lapan’ny antenimieram-pirenena, hoy izy, ka tokony ho izy ireo no hitana ny lehiben’ny fanoheranana. Tsy mitady zavatra hafa entina hanakorontanana ny vahoaka ny fitondrana fa hampiharina ny lalàna dia izay. Izany ve no hitondrana antsika any amin’ny demokrasia sy ny fampandrosoana, sa izay mety amin’ny mpitondra ihany no atao eto ? Mila hatsaraina aza ny lalàna efa misy fa lasa mihen-danja ny fanoherana eto amin’ny firenena. Ho an’Atoa Rakotondrafara Eric Augustin olo-tsotra indray, dia olona ivelan’ny depiote no atao filohan’ny mpanohitra, araka ny lalàna misy. Misy ny lalàna hampiharina, dia misy ny tsy hampiharina, hoy izy. Raha ny lojika dia ny filohan’ny Tim no mahazo izay toeran’ny mpanohitra izay, satria manana ny maro an’isa amin’ny fanoherana ity antoko ity, raha ny nambarany hatrany.